Fifanatrehana tamin’ny governemanta: nitakin’ny depiote vahaolana ny jiro, rano, vidim-piainana… | NewsMada
Nitanisa ny olana eo amin’ny famatsiana rano sy ny fahatapahan’ny herinaratra ny ankamaroan’ireo depiote. Anisan’izany ny any Antsiranana, araka ny fitarainan’ny depiote, Rahelihanta Jocelyne. Nampiaka-peo amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny fahefa-mividy ary koa ny karama tsy miakatra ny depiote Todisoa Andriampandry. “Iandrasana fepetra avy aminareo izany. Tsy misy ny fanjakana tsara tantana izany eto… Tsy misy fandriampahalemana…”, hoy izy.
Etsy andaniny, nitakin’izy ireo fanazavana ny amin’ny tambin-karaman’ny sefo fokontany, ny hifidianana azy ireo. Takin’ny depiote Rossy ny hanadiovana ny antoko politika, mba ho fito ihany fa tsy maherin’ny 400 tahaka ny amin’izao fotoana izao. “Ireo tena manao kongresy ihany no tokony ho ara-dalàna. Foano koa ny anay rehefa tsy hanara-dalàna”, hoy izy.
Velon-taraina amin’ny minisitry ny Asa vaventy ny haratsiAn’ny lalana etsy Antohomadinika, Ankasina, Bekiraro ny depioten’ny boriborintany I.
Ho an’ny avy any Manjakandriana kosa, nijanona ho fampanantenana tamin’ny fampielezan-kevitra ny fanamboarana manara-penitra any an-toerana, tao anatin’ny roa taona. “IRD aho saingy tsy maintsy miteny mba hifanitsiana”, hoy ny depiote Andriamiasasoa Doda. Tahaka koa izany koa ny any Ampanihy, tsy ahitana fotodrafitrasa manara-penitra ho an’ny EPP. Nitaraina koa ny depioten’Ifanadiana fa efa voasoratra amin’ny tetibola ny hanamboarana lalana nefa tsy misy ny asa vita any an-toerana… Voatanisa tao ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny mpampianatra Fram, ny toby miaramila, biraon’ny kaominina…
Na izany aza, teo ireo depiote tsy nangataka fa nidoka ny fanjakana. Anisan’izany ny avy any Vangaindrano sy ny etsy amin’ny boriborintany fahadimy. “Tena miasa izao fitondrana izao”, hoy izy ireo.